I-35 CSS kunye ne-HTML amamenyu eselfowuni, iibhlog, i-eCommerce kunye nokunye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimenyu ezingama-35 kwi-HTML nakwi-CSS
Lola ifani | | CSS, HTML
Eli xesha lixesha le iimenyu kwi-HTML kunye ne-CSS onokuthi uphile ngayo ngokwaneleyo ezo zinto zibalulekileyo ezisivumela ukuba sikhokele umsebenzisi kwezona ndawo zibalulekileyo zeCommerce yethu, ibhlog kunye nokunye. Sihamba nabo ukuya kunika umgangatho wokuchukumisa kwindawo yethu kwaye kungoku nje kunokwenzeka kwimigangatho yoyilo lwe-UI.
1 Imenyu yesilayidi yekhodiyidi
2 I-Swanky ecocekileyo yeCSS yehla
3 Imenyu yeAccordion
4 Imenyu ethe nkqo ene-jQuery kunye ne-CSS3
5 ISETYHULA menu
6 Imenyu yeradial
7 ISetyhula CSS imenyu ye-HTML
8 Umxholo wemenyu yokukhala
9 Iintyatyambo ziyavela kwimenyu
10 Ukuphinda ujikeleze ukuHamba Nav
11 Ukuhla usenyuka
12 Imenyu ehlambulukileyo yokuhla kweCSS
13 Imenyu ephendulayo nelula
14 Imenyu epheleleyo yesikrini kwi-SVG
15 Imenyu yeMega CSS
16 Omnye uMxholo weMenyu
17 Imenyu yoyilo lwezixhobo
18 Imenyu yeselfowuni yeBurger
19 Velocity.js isikrini esigcweleyo esiguqukayo
20 Iphepha elipheleleyo kwi-canvas
21 Ukuhambisa umgca wokusebenza kwemenyu yokuhambisa phezulu
22 Umxholo wemenyu ye-CSS yendlela yemifanekiso
23 Ukuhambahamba ngokuhambahamba ngomgaqo
24 Imenyu yeLavalamp CSS
25 Isilayida sokuhambisa
26 Ukuhamba kwemenyu yefowuni
27 Ingcinga yemenyu ye-IP ye-X
28 Yandisa imenu esezantsi yeselfowuni
29 Ukuhamba ngenqwelomoya okuhambayo
30 Imenyu ngokuskrola kunye nefuthe lokuhambisa phezulu
31 Imenyu yokuhluza eselfowuni
32 Ukuhamba ngaphandle kwe-canvas
33 I-CSS efihliweyo kwimenyu esecaleni
34 Ibar esecaleni yolungelelwaniso
35 Itheyibhile yokuhleba
Imenyu yesilayidi yekhodiyidi
Un isilayidi menu okanye imenyu yehamburger esecaleni iqulathe oopopayi nobabalo kunye nomnwe omncinci wokusebenza.
I-Swanky ecocekileyo yeCSS yehla
Este imenyu yekodiyoni es ilula kakhulu ukuba siyithelekisa nezimbini ezidlulileyo nge-HTML, JS kunye neCSS.
Imenyu ethe nkqo ene-jQuery kunye ne-CSS3
Un Imenyu ethe nkqo ene-jQuery kunye ne-CSS3 de ukuchukumisa kakhulu usetyenziso okanye iwebhusayithi. Zonke iintlobo zotshintsho kunye neegradients ezinezithunzi ezincinci.
Un imenyu setyhula de ukukhangela kwezilingo esebenza ngokugqibeleleyo kwiwebhusayithi yezobuchwephesha. Yenziwe kwi-SVG kunye nePlatform yoPhiliso yeGreenSock, eyahlukileyo ngaphandle kwamathandabuzo.
Okunye Imenyu yeradial kunye novavanyo elisebenza ngokuchanekileyo iphepha elungiselelwe umdlalo.
ISetyhula CSS imenyu ye-HTML
Un Imenyu ejikelezayo yeCSS HTML ukuyibeka kamva kwaye ivula isetyhula ngamava omsebenzisi omkhulu.
Umxholo wemenyu yokukhala
Kule nto imenyu yomsesane Los amakhonkco zibekwe kakuhle kwinxalenye ephezulu nganye ukwenza amakhonkco ahlukeneyo.
Iintyatyambo ziyavela kwimenyu
Okunye okhethekileyo imenyu ezivelelayo oopopayi abasetyenziswe kakuhle kakhulu abavelisa isiphumo esihle.
Ukuphinda ujikeleze ukuHamba Nav
Ukuphinda ujikeleze ukuHamba Nav Yiyo umgangatho ophezulu wokuhla kwemenyu yezoopopayi ezibonisa ngokugqibeleleyo ubume bomxholo wewebhu.
Un imenyu ukulahla ukuhamba iyafana neyangaphambili nangona inezinye iitintshi kuyilo lojongano.
Imenyu ehlambulukileyo yokuhla kweCSS
Okunye imenyu yokwehla komgangatho kwiCSS elandela imigangatho yoyilo yangoku ye-UI.
Imenyu ephendulayo nelula
A Isikrini esigcweleyo, le imenyu ephendulayo nelula kwi-HTML5 kunye ne-CSS3 iyahambelana ne-Internet Explorer 11.
Imenyu epheleleyo yesikrini kwi-SVG
Un imenyu epheleleyo yesikrini kwi-SVG ibekwe ecaleni kwihambhega kwaye itsala amehlo kakhulu.
Imenyu yeMega CSS
Un Imenyu yeMega kwiCSS nakwi-HTML eyahlukileyo kwinto ebonwayo, enesimbo sangoku nesincinci.
Omnye uMxholo weMenyu
Omnye uMxholo weMenyu lolona khetho lufanelekileyo ukuba ujonge imenyu eyahlukileyo neyantlandloloLe yinto entle enkosi kwimenyu yesiko kwi icon kunye noopopayi abenziwe ngobuhlungu.
Imenyu yoyilo lwezixhobo
Imenyu yoyilo lwezixhobo ngayo isekwe kulwimi loyilo lukaGoogle.
Imenyu yeselfowuni yeBurger
Velocity.js isikrini esigcweleyo esiguqukayo
Velocity.js isikrini esigcweleyo esiguqukayo Imenyu ye umgangatho omkhulu kwisiphumo esifezekisiweyo kunye namava ayo phantse awodwa omsebenzisi. Isikrini esipheleleyo se-flexbox esine velocity.
Iphepha elipheleleyo kwi-canvas
Iphepha elipheleleyo kwi-canvas ngumgangatho ophezulu, imenyu epheleleyo yesikrini esebenza ngokugqibeleleyo ukubonisa uyila njani iwebhusayithi ngaloo maxabiso.
Ukuhambisa umgca wokusebenza kwemenyu yokuhambisa phezulu
Un hover imenyu ukusebenza komgca okulula kwaye intle kakhulu.
Umxholo wemenyu ye-CSS yendlela yemifanekiso
Enye ingcinga imenyu ene-clip-path Inendawo yokuhambisa into enomdla kakhulu kunye nezinye iindidi zoopopayi.
Ukuhambahamba ngokuhambahamba ngomgaqo
Ukuhambahamba ngokuhambahamba ngomgaqo yenye imenyu hover yamakhonkco onomdla iziphumo.
Imenyu yeLavalamp CSS
Imenyu yeLavalamp CSS iqulethe a hover oopopayi kunxibelelwano ngalunye ozibophelela ekuguqukeni.
Un isilayida sokuhambisa eskrolela kwikhonkco ngalinye Ukwahlula ngombala obomvu kunye noopopayi obakhathalelwe kakuhle beziphumo ezilungileyo.
Ukuhamba kwemenyu yefowuni
Un Ukuhamba kwemenyu ye-burger zempembelelo enkulu ejolise kwizixhobo eziphathwayo.
Ingcinga yemenyu ye-IP ye-X
Un imenyu eyilelwe i-iPhone X onokunika iwebhusayithi yakho ukuba umgangatho wokuchukumisa ukutshatisa uyilo lwefowuni yeApple.
Yandisa imenu esezantsi yeselfowuni
Yandisa imenu esezantsi yeselfowuni yenzelwe i i-footer kunye noopopayi abahle kunye nokufuduka okufanelekileyo kakhulu. Ubungangamsha kuwo onke amanqanaba ujongano lweselfowni yakho okanye iwebhusayithi.
Ukuhamba ngenqwelomoya okuhambayo
Okunye Imenyu yoopopayi yeselfowuni ngemvelaphi yoopopayi ejikelezayo yesiphumo esihle esibonakalayo.
Imenyu ngokuskrola kunye nefuthe lokuhambisa phezulu
Okunye umphumo omkhulu kwimenyu eyahlukileyo kunye ne-quirky. bucala ngasekhohlo imenyu ngokuskrola kunye nefuthe lokuhambisa phezulu ilungele iivenkile zokutyela, uphononongo kunye nokunye.
Imenyu yokuhluza eselfowuni
Un imenyu yecebo lokucoca ulwelo iguqulelwe kuhlobo lwewebhu kwaye ijolise kwiselfowuni.
Ukuhamba ngaphandle kwe-canvas
Ukuhamba ngaphandle kwe-canvas Yimenyu ethi linga ngotshintsho kunye nokuhamba ukubakhona ngoku. Ukuba ujonga into entsha oza kumangaliswa ngayo, inqanaba layo lelona luhlu.
I-CSS efihliweyo kwimenyu esecaleni
Un Imenyu esecaleni kwiCSS yintoni efihliweyo kwaye ke iyavela nge icon yehambhega.
Ibar esecaleni yolungelelwaniso
Sebenzisa bootstrap endaweni ye-flexbox ukuxhasa IE9 / 10. Enye imenyu efanelekileyo kakhulu Ibar esecaleni yolungelelwaniso ngokwengcinga yayo.
Itheyibhile yokuhleba yimenyu okwehlayo okwenzeka xa ucinezela kwiqhosha lesitshixo esikhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » Iimenyu ezingama-35 kwi-HTML nakwi-CSS
Molo ndifumana amamenyu ahlukileyo afumanekayo kweli phepha anomdla kakhulu, umbuzo wam uyifaka njani iifayile zejs kwimenyu? amatyeli aliqela ndizamile ukwakha nayiphi na imenyu ene-js engasebenziyo, okanye engakwaziyo ukuyifaka, ekuhloleni izinto zesikhangeli ithi umsebenzi obonakala kuqala awuchazwanga kwaye ke ngawo onke amamenyu
Igalelo elihle kakhulu :)
Ungawutyala njani umfanekiso kwi-Photoshop, kulula kwaye uyakhawuleza